Golaha Amaanka oo Soomaaliya u kordhiyey fududeynta xayiraadda hubka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
New York – Mareeg.com: Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa isku raacay in Soomaaliya loo kordhiyo fududeynta cunaqabateynta hubka oo muddo sanad ka hor laga khafiifiyey.
Shir Goluhu ku yeeshay magaalada New York ee dalka Mareykanka, ayuu dhanka kale ku adkeeyay xayiraad qaar ka mid ah hubka sida hubka culus, iyadoo laga cabsi qabo in hubkaasi u gubdo kooxo Islaamiyiin ah.
Golaha Amaanka ayaa si buuxda isugu raacay in fududeynta cunaqabateynta hubka Soomaaliy la sii wado ilaa bihsa October ee sanadka 2014.
Danjiraha Britain u fadhiya Qaramada Midoobay, Mark Lyall Grant, ayaa shirka Golaha Amaanka ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay wajahyeso xaalad adag oo la xiriirta ilaalinta hubka iyo soo dejintiisa.
“Arrintaas waxaa loo yeelayaa in si gaar ah loo hubiyo inaan hubku ku dhicin gacanta Al-Shabab oo ah ku xiran Al –Qaacida” ayauu yiri Mark Lyall Grant.
Danjiraha Britain u fadhiya Golaha Amaanka ayaa tilmaamay in khatarta la xiriirta in hubka dowladdu u gudbo gacmo kale ay tahay mi jirta oo dhab ah.
“Khatarta ah in hubku ka baxo gacanta dowladda Soomaaliya oo dhinacyo kale u gudbo waa mid dhab ah” ayuu yiri Lyall Grant, laakiin waxa uu carrabka ku adkeeyey in dowladda Soomaaliya ay ballan qaaday iney arrintaas aad u hubin doonto.
Dhawaan ayaa kooxda la socodka hubka Soomaaliya ee taabacsan Qarama Midoobay waxey soo saareen warbixin lagu xusay in hub ay leedahay dowladda Soomaaliya uu gacanta u galay Alshabaab.